तपाईं जे भन्नुहोस् ! (कविता) : लक्ष्मीप्रसाद कोइराला - OneZero News
तपाईं जे भन्नुहोस् ! (कविता) : लक्ष्मीप्रसाद कोइराला
तपाईॅ जे भन्नुहोस् ,
नेपालको राजनीति भनेको,
त्यो एकबोरा आलु हो,
जुन ठुसठुसी गन्हाउँछ।
नेपालको राजनीति भनेको
त्यो रत्यौली जस्तो-
चित्रबिचित्रको खेल हो
जुन दुलाहाको घरमामात्र खेलिन्छ।
तपाईॅ जे भन्नुहोस्।
राजनीति भनेको यी दुवै हो !?
राजनीति भनेको यी दुवै होइन ?!?
तपाईॅ जे भन्नुहोस् !!!
राजनीति भनेको केही हो
तर सबैथोक होइन।